Daawo: Muqdisho oo lagu sameeyay Gaadhi aan Xabaddu Karin & Bandhig Carweedkii Bulshada ka yaabiyey | KALSHAALE
Dec 5, 2018 - 6 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Masuuliyiin ka tirsan Dawladda ayaa daahfuray bandhiga wax soo saarka warshadaha ciidanka Asluubta dalka oo maanta Muqdisho ka bilowday.
Barndhig Carweedkan ayaa waxaa sameeyay Maxaabiista ku xidhan Xabsiga dhexe ee Xamar, Waxayna halkaasi kusoo bandhigeen Gaadhi aan Xabaddu Karin, Qalabka Fadhiga, Kuraas, Miisas Casri ah iyo Qalabka Hiddaha iyo dhaqanka oo ay Sameeyeen.
WAA ISKA HADLOW AHMED SOMALI.
-Mar uu AUNTE CALI MATTAAN XAASHI ahaa Taliyaha Ciidanka Cirka Somali buu gardarro igu galay markaasay caroo dhan igu habsatay. *Aniga & Cali Mattaan waxaa naga dhaxay wuxuu Talyanigu ugu yeero AMORE ODIO badina anaan u hoggaansanayn amar kiisa SAA waxaan ahaa nin hawshiisa ka adag oo ISMAHADIYAYE. *Markii la yiraah Sargaal hawshaa qabta keen BADI anuu iso qabanjiray MARKAAN si caadiya iskaga hornimaadna BADI wuu i ganaaxi jiray ANIGUNA Wixiii ka baxsan niidaamka disciplina Militare WAAN diidijiray. *Isaguna kalsooni usan muujinayn buu igu qabay. ***Aan ku noqdo caradi isugu-key yeeratee MARKAY meel sare ila gaartay AYYAAN ku celceshaday heestii Cabdi Qays taasoon isku dejinay; “ABIDKAYBA WAAN JIRAY JABINKU SUU DHACAAYE +WAAN JOOGAY DUNIDE WIXI UU RAG JIITE +JIILAALKU IMA KARO IYO JIDIN CADAADKUYE +MA JILCAMO MA JEEDSADO MANA JIRIRICOODE”. £$£$£$JEEX BIRA KA HARAY IYO JAB FINIINAY BAAN AHE +WADNAHAYGU JALAWDIYO MA YAQAAN JUGLAYNTE. *KAMA JOOGSAN ABIDKAY HALKAY LAABTU JAMATEE. ***Cabdi QAYS markii XAMAR laga raacday oo HARGEYSA lagu Dhabanaanay WAAKII waddankaba ka haajiray MUDDO ka dibna WAXAAN arkay isagoo Jooga Hargeysa oo SHIB-AH oo dhinacyada iska fiirina WAA HALKAY AHAYD IN TAALLO LOO DHISO ISAGOO NOOL. ***Ayaamahan maadaama ay dawladdi Farmaajo/Khayre ay meel fiican marayso Carqaladayn ay Canaasiir yaryara oo Alshabaab la shaqeeya ay wadaan mooye WAA inaan annagu iska mayracano (mirano). WBT
Marba hadii dowladdi farmaajo iyo kheyre. Ay musuq maasuqii ugu weynaa faraha kula jiraan. HAY.adihii la xisaabtami lahaana ay laaluush u isticmalaan. Waa in aan damashaadnaa. madaama aan nahay. Tageerayaasha cuqdadeysan.
Dowladdu afgooye wexey u raacdaa diyaarad. Jowhar wexey u raacdaa diyaarad. Baydhabo. Wexey dhahday. Hadaan ninkaan wadano la dooran. Wax doorasho ah kama dhici karto. Waa in aan damashaadnaa.
MARXUUN MEEL MA MAALEE MAQAAMKA MURSAL MEEL KUSHEEG.
Arinta musuqa ee ay la wareegayaan koox Tuugo ah oo sitay warqado aan lahayn wax saxeex ah lama aaminkaro.
Dad aan joogin meesha oo magacaantootada la soo qortay.Midka ka dada arintan watay ayaa la waydiiyay”maxaad u keeni waydeen List la wada saxeexay oo aad isku khilaafteen Kooxdiinii Gudida ahayd?
Dad aan ahaynba Professional oo wata warqado bilaa saxeex ah lama aaminikaro.
Mid ka mid ragaasi wuxuu sheegay in isaga oo jooga Turkiga wathsap loogu soo sheegay hawsha lagu jiro,deedana Turkiga ka soo diray,Yes.Dadka noocaasi ah ee wathsapka wax iskugu sheegya,miyaa ii sheegaya ama aan ka dhegaystaa in la xaday 40 Milyan oo Dollard?|
:Anoo jooga Turkiga ayaa wathsap la iigu soo diray warka oo halkaa ayaa wax walba la iiga sheegayay”.Sidaa waxaa yidhi ninka ka mid ah ragga Tuugta ah ee sheeganaya inay yihiin Gudida Maaliyada oo Golaha shacabka.
Anyway,aniga oon hubin inay dawladu tahay bilaa musuq,hadana Kooxdani waa Koox ujeedo kale wadata oo waliba Nacasyo ah.
Sida aan ku hayo warar hoose Xasan sheekh Maxamuud ayaa meesha ka dhextoosay.
Walee Kooxda Khayre waa Koox hufan oo ilaa xad shaqo fiican haya.
Inkastoon wada leenahay hal u jeedo oo ah in la helo qaran somaliyeed si. Aan uga mid noqono aduunka sharafta leh. Hadana waxaa jiro walaac badan. Oo ku aadan kheyre iyo guruubkiisa.
Ma ogolo in lala xisaabtamo. Marka fari soo gasho wexey isticmalaan laaluush wexey kala dhantalaan barlamaanka.
Hadeeysan jirin musuqa lagu edeeyay mexeey u gar bixi wayeen. Maxaa keenay in ay kala jebiyaan gudigii maaliyadda?
Mr kheyre waa hogaamiye sare. Laakiin waa in la shegaa qaladaadka dowladiisa.
Kooxda UGUS waxay u qaybsanta 2bo, MID hubaysan oo Gobollada ku ugaarsata Shacabka masaakiinta & mid ku dhex MIILAN Dawladda & siyaasiinta heer kastaba. *2BADAAN madax waxaa Qatarsan KAN ku dhex jira Dawladda & Siyaasiinta SABABTA oo ah WAXAY docodocayn joogta ku hayyaan WAX qabati Dawladda si aan horay loogu socon oo markastaba waxay la daba taaganyihiin Eedaymo & Mooshin SHACABKA lagu jaahwareerina. WBT
Daanyeernimo waa tan. Uma baahnid cawaanyahow baabuur dagaal, iyo qorri. Najisyahow waxaad u baahantahay in aad barato sida wax loo nooleeyo, loo abuuro, loo xanaaneeryo. Nijaaso waa kuwaan oo kale, iyo waxa horboodaya Somali oo dhan.